एकदमै सहि र सटिक कुरा। एक पटक लीईसकेको सपथ पून अर्को पटक लिएर ओबामा पक्कै पनि सानो भएनन (जुन सपथ उनले पून नलीएको भए पनि कसैले उनलाई औंला उटाउने थिएनन्)।
यता भने हाम्रा नेताहरुबाट नैतीकताको आशा गर्नु भनेको हाम्रै गल्ति जस्तो भैसक्यो अब त ।
परमानन्द झाको विषयमा नेपालको संविधानमै के छ भनेर हामी स्पष्ट भएका छैनौ । त्यहि भएर त्यो कुरामा ठ्याक्कै कुरो गरिहाल्न पनि मिल्दैन । मातृभाषमा सपथ खान पाइने नियम छ भने परमानन्दको हिन्दी नै मातृभाषा हो कि त ॥
तर नियमकानुनुको कुरा उठाउनुभाको चैँ राम्रो लाग्यो । यो मात्रै होइन अन्य धेरै कुरामा पनि नियमकानुन मिच्ने काम भइराको छ हाम्रो देशमा । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले आफूलाई कानुनभन्दा सानो सम्झिँदा रै'छन् । नेपालमा पनि सबैले कानुन मेरो दायरामा होइन कि म कानुनुको दायरामा छु भनेर सम्झिन सके हाम्रो देश धेरै उँभो लाग्नेथियो ।
प्रज्वल जीले कता बाट सम्झनु भयो परमानन्द झाको कुरो? हाम्रोमा गफ मात्रै त हो गर्ने जे गरे पनि हुन्छ, नियाम कानुन खै कता के को कता तिर हुन्छ। नया नेपालमा के हुन्छ की भनेर दौंतरीमा काउन्ट डाउन राखेको थियो के को हुनू, गफै गफमा त्यो कुरो अस्तायो।
नेपाली लाउके नेताहरुले केही पाठ लिएको भए राम्रो हुनेथियो । अन्यथा, कुरो गर्‍यो कुरा कै दु:ख हो !
प्रज्वलजी मैले बुझेको नियम कानुनको पालना हुने देशमा भोलि सपथ ग्रहण गरेको भएन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो भने त्यो व्यक्तिको पद स्वत: जान्छ होला । त्यसैले नै ओबामाले दुई पटक सपथ लिनु परेको हो। नेपालमा त जो कानुन मान्दैन त्यहि ठुलो कहलिन्छ , त्यसैले जाति टेढिन सक्यो त्यति ठुलो भन्ने भ्रम परेको होला उराप र प्रम लाई ।
पन्डा जि ले भनेजस्तै, जसले नराम्रो काम गर्छ, जसले नियम कानुन को मर्यदा पालना गर्दैन त्यही नै ठुलो हुन्छ हाम्रो देशमा अनी ठुलो कहलिन पनि त परमानन्द, प्रचन्डले सबिधन को उन्लंघन गर्नु पर्‍यो नि होइनर?
आफ्नै मुलुक हाक्ने नेता देखी चित्त दु खाएर तिनलाई गाली गर्दै मन बुझाउनु परेको छ ! कत्ती अभा गि जनता है हामी ?